Urwayni - Wikipedia
Dariiqada Urwayniya oo af ingiriis loo yaqaano urwaynism, waxaa Soomaliya keenay nin la yiraahdo Ismail Urwayni oo dariiwa ka mid ah Saalixiya. Wuxu Ismail Urwayni ka soo qaatay macalinkiisi Maxamed Saalax. Waxaa xusid mudan in culida dhinaca diinta ee dalka sii joogtay ay haysteen Dariiqada Qadiriya. Dariiqada Urwayni waliba waxay ahayd dariiqada ka tirsana Darwiishta.
Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed oo loo yiqiin Sheekh Xasan Barsane wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1853, wuxuuna ku dhashay tuulada loo yaqaan Ubaadi oo u jirta qiyaas ilaa 68Km magaalada Jowhar, Gobolka Shabeelaha Dhexe, Soomaaliya.
Sheekh Xasan Barsane wuxuu ka soo jeeday Beesha Gaaljecel, gaar ahaan qoys u saaxiib ah Diinta Islaamka ahaana fardooleey.
Hooyadiis waxaa la dhihi jiray Xalima Hilowle, Aabihii Sheekh Nuur wuxuu ahaa shee9kh ka tirsan dariiqooyinka Raxmaaniya. Wuxuu ka dhex muuqday hoggamiyana u ahaa jameecadiisa.
Sheekh Xasna Sheekh Nuur Sheekh Axmed wuxuu bartay Qur’aan Kariimka isagoo yar, kuna bartay tuulada Unaadi wuxuuna barashada Diinta Islaamka ku bilaabay isagoo aan weli gaarin 10 jir halkaas oo la shegay in aabihiiis uu mashaa’ikhda Diinta bartaa ugu keenay. Markuu laabtan jirsaday ayeey isaga iyo aabihiis isku raaceen inuu sii kordhisto wax barashadiisa uu doonto iyadoo ay jirtay in aabihii uu mashaa’iikh fara badan ugu keenay halkii ay ku noolaayeen.
Shiikha wuxuu aaday meel walbo oo uu ku tabaayay in cilmi uu yaalo oo uu ka sii kororsan karo, meelaha uu cimliga u doontay dalka gudihiisa waxaa ka mid ahaa Mateey Aw Xasan oo ku taala Afgooye iyo Magaalada Muqdisho. Sheekha kama uusan zuulin inuu raadiyo cilmi isagoo markaana aaday dalka dibadiisa sida magalada Makka oo uu tagay laba jeer oo kala duwan wuxuuna halkaas ku soo gutay xajkii iyo cilmi uu raadinayay, wuxuu halkaas ku maqnaa muddo ka bdan saddex sanadood.
Sheekhu waxa uu halkasi kula soo kulmay Sheekh Maxamed Saalax oo sheekha ay dariiqada SAALIXIYADA ka soo wada jeedaan..
Halgankii Sheekha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sheekh Xasan Barsane markii uu ku soo laabty dalka waxaa dalka soo buux dhaafiyay gumeyste kala duwan oo markaas iyo ka horba ku sugnaa dalka tan iyo intii ay dhacday qeybsashaddii Afrika ( 1884 ) dalalka reer galbeedka oo ay ugu horeeyeen Ingiriiska, Faransiikam iyo Talyaaniga ayaa soo galay dalkeenna hooyo ee Somaaliya. Sheekhu wuxuu ka biyo diiday inuu ku hoos noolaado gumeyste isagoo ka door biday inuu geeriyoodo isagoo dhawraya sharafta Diinta iyo dalka. Sheekhu wuxuu dhexgalay dadka isagoo jamciyay ciidan tiradiisa lagu qiyaasay ilaa labaatan kun ilaa soddon kun ( 20,000 – 30.000). tababar dheer iyo wacyi gelin ka dib sheekha iyo ciidamadisii waxay u kaceen difaaca dalka iyo Diinta.
Waxaa ay la kulmeen hanjabaad iyo hujuum kaga imaanayay dhanka gumeystaha Talyaaniga oo iyagu markaas heestay dhamman koofurta Soomaaliya iyo Etiopia oo aheyd dalka kali ah ee Afrika kana qeyb galay qeybsashada dalalka Afirca ee Berlin 1884.
Sheekhu dhag jalaq uma siin dhamaan hanjabaadaas iyo baqdin galin taas kaga imaameysay dhanka Gumeystaha. gumeystaha Talyaaniga xiligaasi waxaa Soomaaliya wakiil uga ahaa Jeneral la oran jiray Mario Devechio. Si kastaba ha ahaatee Sheekha wuxuu go’aansaday inuu la dagaalamo.
Waqtigii ayaa dhamaaday waxaa bilowday dagaaladii fool ka foolka ahaa ee Sheekhu la galay gumeystihii. Sheekha iyo gumeystaha waxay kulmeen marar badan iyadoo dhamaan dagaaladii uu la galay gumeystaha uu halkaasi kaga guuleystay. Waxaana dagaaladii u Sheekha la galay gumeystaha ka xusi karnaa :
Waxaa kaloo ka mid ahaa dagaaladii uu la galay gumeystaha gaar ahaan Talyaaniga oo aan ka xusi karnaa, ayagoo guutooyinka Sheekh Barsane ay kala hogaaminaayeen :
Abaanduule Maxamuud Yuusuf Aaadan 'Fardoole' ee dagaaladii,
Abaanduule Rooble Liibaan Wacays ee dagaaladii,
1. Hilweyne 1923
2. Jiliyaale 1924
3. Hareeriile 1924
Sheekh Xasan Barsane wuxu ku caan baxay inuu ciidanka ka bar bar dagaalamo isago dhiiri galin jiray una sheegi jiray wax yaalaha haddii ay ku dhintaan iyo haddii ay ka bad baadaanba haleyaan waxaan u wadaa Aakhiro iyo Aduun. Dagaaladii faraha badanaa ee uu la galay Sheekha wuxuu ku laayay rag faro badan oo ka tirsanaa gumeystaha oo isugu jiray saraakiil iyo dablay .
Gumeystaha oo ka faa’ideystay maqnaashaha ciidamada Sheekha oo markaas ku maqnaa dagaalo dhinaca Hiiraan ah ayaa dhabar jabin ka dib waxa ay hareereeyeen xaruntii Sheekha iyagoo adeegsanaaya hubka xiligaa ugu casrisanaa lana yimid ciidan fara baan oo ay ka soo wadeen dhankaas iyo Cadan iyo weliba kuwa kale oo ay ka soo kaxeeyeen dalalka kale oo ay gumeysan jireen kuwaas oo ahaa calooshood u shaqeystayaal sida ku cad buugii uu qoray Mario Devechio oo lagu magacaabo ORIZENTO DI IMPERO. Ka dib Sheekha waxaa uu u gacan galay cadowga, waxayna ka dalbadeen inuu ciidamadiisa ku amro inay is dhiibaan, waa uu ka biyo diiday. Si kastaba ha ahaatee gumeystaha ayaa aakhiritankii ku guuleystay inay qabtaan oo ay xabsiga dhigaan Sheikh Xasan Barsane sanadu markay ahayd 1924.
Sheekh xarigiisa ayaa la Halmaalay Jawaabtii Geesinimo waxaa lagu xasuustaa inuu Gumeestihii Talyaaniga ku yiri, Markii warqadii Jawaab celinta aheyd uu diraayey wuxuu hadalka ku bilaabey, Bisinka kadib, Aniga way isoo gaartey warqadaadii waana fahmey waxa eey ka koobneed oo dhan, Laakiin waa qasab inaan ku Ogaysiiyo inaan anagu adeeci doonin awaamirtaada iyo inaan ku biiri (kamidnoqon) doonin ururkaaga. Dowladiina sharci u gooni ah ayeey leedahey Anagana midlamid ah ayaanu leenahey, Mana aqbaleyno sharci aanan keena ahayn, Sharcigenuna waa sharciga Allah iyo Nabigiisa Muxammed (SCW). Anagu lama mid nihin dadka kale, Qof anaga naga mid ahna laguma qorin "Zaptie" (Quwada ama Awooda Gumeeysiga), Mana dhici doonto!!! Haddii aad dhulkeena u timaado si aad noola dagaalanto, Anaga waan kula dagaalami doonaa hab kasta iyo xeelad kastaba. Aduunkan waa mid kudhow dhamaad waxa ka harey ayaaba aad u yar. Mana dooneyno inaan ku nagaano (joogno) Dunidaan, waxaana nooga roon inaan dhimano anaga oo difaacaneyna Sharcigeena. Allah u naxriisto amiin amiin
Xabisiddii Sheekha iyo Dhimashaddiisii[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa Sheekha lagu xabisay xabsiga loo yaqaaney Gaalshiro iyadoo markaasi maxkamada gumeysiga ay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah oo ay u dheertahay shaqo adag iyo jirdil. Si kastaba ah ahaatee hadana gumeystaha ayaa ku qanci waayay inay xabisaan oo kaliya waayo Sheekh Xasan Barsane ayaa ahaa caqabadii ugu weyneyd ee ay gumeystaha Talyaaniga kala kulmeen koonfurta Soomaaliya iyadoo aanba dhihi karno sheekha wuxuu ahaa quwadda kali ah ee dagaalo waaweyn kaga hortimid. Talyaaniga ayaa 3 sano ka dib waxay hadana isku dayeen inay dilaan Sheekha iyagoo ay u suuro gashay sanada Markey ahayd 1927 iyado markaasi ay gumeystuhu ku xireen meel god ah oo aan ku filneyn inuu fariisto godkaas ayaa wuxuu lahaa oo kali ah meel yar oo shabaq camal ah oo uu xoogaa wax neef ah ka qaadan jiray. Intaas oo kali ah ugumaysan simin hadana waxay ugu dareen inay sun ku buufiyaan qolkii uu ku xirnaa waxaana amarkaasi bixiyay KABEELLO sida uu xusay MAXAMED ABDI (Odoyaasha Muqdisho ) oo ka mid ahaa sadexdii Nin ee loo adegsaday inay fuliyaan falkaasi. Ugu danbeyntii Sheekha ayaa ku geeriyooday suntii. Sida ku xusan Orizento Impero iyo TREE ANNI DE IN SOMALIA .Sheekha Allaha u naxariistee wuxuu dhintay taarikhdu mrkey ahayd 13 January 1927 waxaana lagu duugay Qabuuraha Sheekh Suufi oo ku yaalay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana markii danbe loo qaaday oo uu hada ku aasan yahay degmada Jilyaale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe oo markii hore Sheekha xarun u ahayd.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Urwayni&oldid=196352"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2019, marka ee eheed 20:56.